Impembelelo yeBrand kwiSigqibo seNtengo yokuThengwa kwabaThengi | Martech Zone
Besihleli sibhala kwaye sithetha kakhulu malunga nokunikezelwa kunye nesigqibo sokuthenga njengoko sinxulumene nemveliso yokuqulathiweyo. Ukwamkelwa kweBrand kudlala indima ebalulekileyo; mhlawumbi ngaphezulu kunokuba ucinga! Njengoko uqhubeka nokwakha ulwazi malunga negama lakho kwiwebhu, gcinani engqondweni ukuba-ngelixa umxholo ungakhokeleli kwangoko kuguquko- kunokukhokelela ekuqondeni uphawu. Njengokuba ubukho bakho busanda kwaye uphawu lwakho luluba sisixhobo esithembakeleyo, ukuqhuba ithemba ngokuguqula kuya kuba lula ngokuhamba kwexesha.
UHeidi Cohen unenqaku elihle apho abelana khona Iinkcazo ezingama-30 ezahlukeneyo zeluphi uphawu ngu. Ingcaciso yam inokuba kukudibana kwezimvo ezininzi.
I-brand yesazisi inkampani yakho, imveliso, okanye inkonzo ekuhambeni kwexesha. Idibanisa zombini izinto ezibonakalayo nezibonisiweyo njengoko kuchaziwe kwishishini, kunye nokuchongwa kwesazisi esivela kwabanye abangaphandle kwenkampani. Izinto ezibonakalayo zibandakanya iilogo, imizobo, imibala, izandi kunye nevidiyo. Iinkalo zonxibelelwano zibandakanya imvakalelo, inkcubeko, ubuntu, amava kunye nesazela sombutho kunye nabantu abakulo.
Nazi ezinye zeenkcukacha manani eziphambili kwimpembelelo yebrand kwizigqibo zokuthenga zabathengi:
Advocacy - Iipesenti ezingama-38 zabantu bacebisa uphawu ezifana or landela kumajelo asekuhlaleni.
uhlobo - Iipesenti ezingama-21 zabathengi bathi bayithengisile imveliso entsha kuba ibivela kuhlobo abaluthandayo.
Ukuguqulwa -Mama-38% oomama kunokwenzeka ukuba bathenge iimveliso kwiimveliso abanye abantu basetyhini Kanye kufacebook.
email Marketing -I-64% yabaphenduli bayakuvula i-imeyile ukuba bayayithemba i-brand.
ukufuna -16% inyuka yenqaku lokukhumbula uphawu xa a uphawu olubonakalayo lwavela kwiziphumo zokukhangela.
Imidiya yokuncokola - Iipesenti ezingama-77 zeencoko zebranti kwimidiya yoluntu ngabantu abafuna ingcebiso, ulwazi, okanye uncedo.
Amazwi omlomo -Iimpawu ezikhuthaza amandla aphezulu emvakalelo zifumana amaxesha ama-3 kwintengiso yelizwi-ngomlomo.
Ngophawu olubambe ubunzima obuninzi ngaphezulu kwesigqibo sokuthenga, eyona nto iphambili yokuthatha umbutho kukuba umbono wenkampani yakho unefuthe elimangalisayo. Oko kuthetha ukuba elona qhinga lokuthengisa elinempembelelo elisasazwe kuwo onke amajelo liya kupheliswa yinkonzo yabathengi eyoyikekayo okanye isiganeko esonakalisa umbono wombutho.
tags: imbekouhlobouthethelelo lophawuuphawu lophawu kunye ne-imeyileuphawu lwezorhweboukuthengisa uphawuuphawu kwimidiya yoluntuigama lophawu lomlomoUkufaka uphawuisigqibo sokuthenga kwabathengiisigqibo sokuthengailizwi lomlomo
Ukufikelela: Ukude kangakanani ukuhamba kwakho kweTweet?
Sep 29, 2015 kwi-4: 16 AM
Oku kulungile ukuthatha ukuba umxholo udlala njani indima enkulu ekuphawuleni. Umntu kufuneka abone ukuba xa besenza umxholo wentengiso ayisiyiyo kuphela malunga nokuguqula abatyeleli besiza babe ngabathengi. Isenokuba kukwakha isazisi sophawu kunye nokuguqula ezi ndwendwe zibe ngabathetheleli bophawu. Enye indlela yokwenza oku kukuqinisekisa ukuba ulinganisa ukusebenza kunye nokufikelela kumaphulo akho kunye nendlela abantu abaphendula ngayo kumxholo wabo ngeendlela ezahlukeneyo kwaye kulapho idashboard yokufaka ingxelo yokuthengisa efana neTapanalytics iza iluncedo kakhulu.
Sep 30, 2015 kwi-1: 20 AM
Enkosi ngokwabelana ngenqaku. Ukubeka uphawu kunye nokuchonga imveliso kuhlala kuyinto ebalulekileyo xa kusiziwa ekuthengeni. Igama lophawu lihlala linempembelelo ebantwini kwaye ewe, umxholo udlala indima ebalulekileyo.